जियोफेन्सिङ मार्केटिङका ​​फाइदाहरू - Victor Mochere
के तपाइँलाई तपाइँको फोनले तपाइँको जासुसी गरेको छ? तपाईंले भर्खरै खरिद गर्ने योजना बनाएका वस्तुहरूको विज्ञापन कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने बारे सोच्नुभएको छ? के तपाइँ कुनै पनि मलमा पुग्ने बित्तिकै डील र बिक्रीको बारेमा सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ? वा तपाईंले कुनै पनि क्याफे वा कफी पसलबाट जाँदा कुनै कुपनहरू प्राप्त गर्नुभएको छ? हामी सबैले अनुभव गर्छौं। हुनसक्छ गुगलले हाम्रो विचारहरूमा कोड क्र्याक गरेको छ। वा यो केवल एक स्मार्ट मार्केटिङ रणनीति हो। ग्राहकहरू प्रतियोगीहरूको पसल/साइटहरूमा हुँदा पनि उनीहरूलाई थाहा नदिइकन तपाईंले आफ्ना उत्पादनहरू वा सेवाहरू बजार गर्न सक्ने तरिका हो भने के हुन्छ। Geofencing मार्केटिङले यो सबै बनाउँछ।
जियोफेन्सिङ मार्केटिङ भनेको के हो?
जियोफेन्सिङले कसरी काम गर्छ?
मार्केटरहरूद्वारा जियोफेन्सिङ कसरी प्रयोग भइरहेको छ?
जियोफेन्सिङ मार्केटिङको महत्त्व
जियोफेन्सिङ मार्केटिङका ​​सीमितताहरू
सरल शब्दहरूमा, जियोफेन्सिङ मार्केटिङ भनेको तपाईंले डिजिटल नक्सामा कुनै ठाउँ - छिमेक, भवन, वा इलाकालाई चिन्ह लगाउँदा र कसैले त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै तपाईंको मार्केटिङ अभियान ट्रिगर हुन्छ र तिनीहरूलाई सूचनाहरू पठाइन्छ। जिओफेन्सिङ मार्केटिङ स्थान-आधारित मार्केटिङ रणनीतिहरूको श्रेणीमा पर्दछ। मार्केटिङको एक प्रकार जसले मार्केटरहरूलाई राम्रो व्यक्तिगत अनुभवको साथ दर्शकहरूलाई लक्षित गर्न अनुमति दिन्छ। लक्षित दर्शकहरूलाई स्थान-विशेष विज्ञापनहरू पठाउन GPS र उपग्रहको मद्दतमा भौगोलिक स्थान प्रयोग गर्दै।
कुनै पनि geofencing मार्केटिङ अभियान को बारे मा सबै भन्दा राम्रो भाग हो कि यो आकार-विशिष्ट छैन। यसको मतलब कुनै पनि साइजका व्यवसाय वा ब्रान्डहरूले विकल्पको रूपमा जिओफेन्सिङ मार्केटिङ लिन सक्छन्। अब दोस्रो प्रश्न उठ्छ: तपाइँ कसरी निर्णय गर्नुहुन्छ कि तपाइँको बार कति ठूलो वा सानो हुन गइरहेको छ? ठिक छ, सामान्यतया तपाइँसँग तपाइँको बारको सीमा 1000 मिटर र 200 मिटर सम्म विस्तार गर्ने अवसर छ। एउटा ब्रान्डसँग जियोफेन्सिङ मार्केटिङका ​​लागि अभियानहरूसँग पूर्ण लचिलोपन हुन्छ।
तपाईंका अभियानहरूले प्रमोशनहरू, छुटहरू, साधारण अभिवादन पाठमा निमन्त्रणाहरू समावेश गर्न सक्छन् यदि तिनीहरूले रोक्न चाहन्छन् भने। तपाईंले सधैं तिनीहरूलाई प्रस्तावहरूको साथ बिगार्नुपर्दैन। यसबाहेक, तपाइँ वेब ट्राफिकमा आधारित तपाइँको सूचना अनुसूचित गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि पछि साँझ घन्टा तपाईले भारी ट्राफिक प्रवाहको सामना गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो सम्झौतालाई अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नको लागि त्यो विशेष समय अवधिमा फ्ल्याश गर्न तालिका बनाउन सक्नुहुन्छ। जियोफेन्सिङलाई सजिलैसँग तीनवटा सरल चरणहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
१. बिल्डिङ जियोफेन्स
यो चरण हामीले भर्खरै छलफल गरेका थियौं, एउटा क्षेत्रलाई जियोफेन्स सिर्जना गर्ने र त्यही जियोफेन्सको लागि विज्ञापन अभियानको योजना बनाउने निर्णय गर्दै। हो, प्रत्येक बारको लागि, यो फरक हुन गइरहेको छ।
२. दर्शकहरू थप्दै/हटाउँदै
अब, यसको मतलब के हो? जब कसैले तपाईंको जियोफेन्समा प्रवेश गर्छ भने तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो विज्ञापन दर्शकहरूको सूचीमा थप्नुभएको सुनिश्चित गर्नुहोस्। यदि तपाईंले यो चरण छुटाउनुभयो भने तपाईं अर्को चरणमा जान सक्षम हुनुहुने छैन। साथै, तपाइँ पहिले नै तपाइँको जियोफेन्स छोडेका व्यक्तिहरूलाई स्प्याम गर्न चाहनुहुन्न। त्यसैले दर्शकको ट्रयाक राख्नु आवश्यक छ।
3. सूचनाहरू पुश गर्दै
यो सबै प्रयास को लागी कदम हो। अगाडि बढ्नुहोस् र पाठ, इन-एप अधिसूचना, वेबसाइट विज्ञापनहरू, र whatnot मार्फत सूचनाहरू पुश गर्न सुरु गर्नुहोस्।
Geofencing धेरै तरिकामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईको ब्रान्डको आवश्यकता, दर्शक, ट्राफिक, र तपाईले रोज्न सक्ने उत्पादन र सेवाहरूमा आधारित धेरै च्यानलहरू छन्। तल सामान्य रूपमा प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरू छन्, आफूलाई सबैभन्दा उपयुक्त हुने छनौट गर्नुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईंले आफूले चाहेजति धेरै छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै कम छ।
1. मोबाइल अनुप्रयोग
धेरै कम्पनीहरूले एपहरू सिर्जना गरेका छन्, जुन ग्राहकहरूले स्थापना गर्न सक्छन् र कुन मार्केटरहरूले कुनै व्यक्ति जियोफेन्स्ड क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा इन-एप अलर्टहरू प्रसारण गर्न प्रयोग गर्न सक्छन्।
2. पाठ संलग्नता
कुनै पनि कम्पनीले प्रत्येक दिन पाठ सन्देशहरू पठाएर मार्केटिङमा पैसा बर्बाद गर्न चाहँदैन। जियोफेन्सिङ पेश गरिएको छ। जब ग्राहकले जियोफेन्स्ड क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ, पाठ सन्देशहरू मात्र पठाइन्छ।
3. तेस्रो-पक्ष एप
ती ब्रान्डहरूका लागि तिनीहरूका एपहरू छैनन्, तपाईंले सूचनाहरू पठाउन तेस्रो-पक्ष अनुप्रयोगहरूबाट मद्दत लिन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि कति रेस्टुरेन्टहरूसँग तिनीहरूको आवेदन छैन तर तपाईंले अझै पनि तिनीहरूका प्रस्तावहरू र कुपनहरू केही खाने एपहरूमा हाइलाइट गरिएको पाउनुहुनेछ।
4. सामाजिक मिडिया विज्ञापनहरू
तपाईंले कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल एप स्थापना गर्ने बित्तिकै तिनीहरूले स्थान अनुमतिको लागि सोधेपछि तपाईंले अवलोकन गर्नुभएको हुनुपर्छ। किनभने यी अधिकांश प्लेटफर्महरूमा जियोफेन्सिङ क्षमताहरू छन् र तपाईंको स्थानको साथ, तपाईंले पार गर्नुभएका सबै जियोफेन्स क्षेत्रहरूको बारेमा विज्ञापनहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
5. वेब विज्ञापनहरू
यी विज्ञापनहरू तपाईंको ग्राहकको ब्राउजरमा फ्ल्यास हुने गरी कुनै एप्लिकेसनमा नभई फरकसँग सामाजिक मिडिया विज्ञापनहरू जस्तै छन्।
Geofencing मार्केटिङ एक चाखलाग्दो अवधारणा र तपाईंका सबै मार्केटिङ अवरोधहरूको भविष्य समाधानको रूपमा आउँछ तर तपाईंको ब्रान्डले यसबाट कसरी लाभ उठाउँछ? तल केहि आकर्षक नतिजाहरू छन् जियोफेन्सिङ मार्केटिङले तपाइँको ब्रान्ड वृद्धिमा ल्याउँछ।
1. राम्रो लक्ष्यीकरण
जियोफेन्सिङले तपाईंको सूचनालाई थप सान्दर्भिक बनाउने मुख्य फाइदा प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं भौगोलिक रूपमा नजिकका मानिसहरूमा पुग्नुहुन्छ भने तपाईं ग्राहकहरूलाई संलग्न गराउने सम्भावना धेरै हुन्छ।
2. प्रभावकारी मार्केटिङ
बढेको संलग्नताले सुधारिएको मार्केटिङ खर्चमा अनुवाद गर्छ। जियोफेन्सिङको साथ, तपाईं लगानी गर्न इच्छुक ठूला दर्शकहरूमा पुग्न सक्नुहुन्छ, परिणामस्वरूप कम सान्दर्भिक ग्राहकहरूमा कम पैसा खर्च हुन्छ।
3. राम्रो अन्तरदृष्टि
तपाईंले ट्राफिकको ढाँचामा (जब मानिसहरू तपाईंको ठाउँमा/नजिक छन्), भ्रमणहरूको अवधि, र सही प्लेटफर्महरूबाट अभियान दक्षतामा मुख्य अन्तर्दृष्टिहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
४. राम्रो एट्रिब्युसन
जियोफेन्सिङले एउटा शून्यता भर्छ जुन धेरै मार्केटरहरूले विज्ञापन र प्रदर्शन बीचको लिङ्कमा लामो समयदेखि लक्ष्य राखेका छन्। ROI को मूल्याङ्कन गर्नमा, त्यो ठूलो सहयोग हो किनकि तपाईंले सुरुङको दुवै छेउ, तपाईंले निर्माण गर्नुभएको अभियान, र ग्राहकहरूले यसतर्फ दिने प्रतिक्रिया हेर्न सक्नुहुन्छ। कति जित्ने मौका।
5. मोबाइल मार्केटिङ वर्तमान छ
मोबाइलले विज्ञापन उद्योगलाई ओगटेको छ। तथ्याङ्कले बताउँछ कि लगभग 90% भन्दा बढी ग्राहकहरूले कुनै पनि अन्य स्रोतहरू भन्दा मोबाइल मार्फत जानकारी रुचाउँछन्। साथै गुगलको तथ्याङ्क अनुसार, लगभग 71% क्रेताहरूको अन्तरक्रिया मोबाइलमा हुन्छ। यही कारणले गर्दा जियोफेन्सिङ धेरै डिजिटल व्यवसायहरूको लागि राम्रो लक्ष्यीकरण विज्ञापन समाधान हुन्छ।
6. तपाइँको सेवाहरु अनुसार व्यक्तिगत र विशिष्ट लक्ष्यीकरण
जिओफेन्सिङ मार्केटिङले तपाईंलाई आफ्नो सम्भावित ग्राहकहरूको टाउको र ठाउँमा लुकाउन र हात प्रस्ताव गर्न लचिलोपन दिन्छ। एक क्यारियर परामर्श फर्मलाई विचार गर्नुहोस् जुन स्नातक विद्यार्थीहरूमा पुग्न चाहन्छ। विशिष्ट हाई स्कूल र कलेजहरूलाई लक्षित गर्नु भनेको 10-माइलको दायरामा अनियमित रूपमा तपाइँको विज्ञापनहरू प्रदर्शन गर्नु भन्दा धेरै राम्रो विकल्प हुनेछ।
7. वास्तविक समय विश्लेषण
जियोफेन्सिङ अभियानहरूको प्रमुख फाइदाहरू मध्ये एक यो हो कि तपाईंले प्रभाव पार्न र रणनीतिलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न पर्खनु पर्दैन। जिओफेन्सिङ अभियानहरूले अभियान सुरु भएको दिनमा डाटा उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति हुन्छ। दर्शकको प्रतिक्रिया अनुसार तपाइँ तपाइँको रणनीति अपस्केल गर्न स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुहुन्छ।
8. अनुकूलन रचनात्मक विज्ञापनहरू
तपाईंले6महिनामा एक पटक मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने बिलबोर्डहरू जस्तो नभई, जियोफेन्सिङ विज्ञापनहरूले कुनै झन्झट बिना जोन र लक्षित दर्शकहरूलाई अनुकूल बनाउन सक्छन्। तपाईं एकै समयमा विद्यार्थीहरूको लागि ठूलो आवाजमा कम नाटकीय रूप र अनुभवको साथ अफिस पेशेवरहरू सम्म पुग्न सक्नुहुन्छ।
जियोफेन्सिङ मार्केटिङको विचार जति परिष्कृत लाग्न सक्छ, यो कमजोर पनि छ। कुनै उपकरणले जियोफेन्समा प्रवेश गर्दा पनि दर्ता नगर्ने उदाहरणहरू हुन सक्छन्। यसबाहेक, अन्य परिस्थितिहरूमा, जब जियोफेन्स स्टोरको वरिपरि स्थापित हुन्छ, तर भीडभाड भएका सहरहरू र अन्य मापन गर्न गाह्रो क्षेत्रहरूमा, यसले यन्त्रहरूलाई पुनर्विलोकनमा गलत रूपमा जोडिएको हुन सक्छ।
जिओफेन्सिङ मार्केटिङ तपाईको स्टोर वा सामाजिक च्यानल ट्राफिक बढाउनको लागि उत्कृष्ट पहल हुन सक्छ। तपाईंले आफ्नो लक्षित दर्शकहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। स्थानहरू जान्नु र लक्षित गर्नुले तपाईंको लागि सम्झौता गर्दैन। जबसम्म तपाईं आफ्नो अनुसन्धान र लक्ष्यहरूसँग स्पष्ट हुनुहुन्छ, तपाईं सफल भौगोलिक-लक्षित मार्केटिङ अभियान निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ।